Madaxweynaha Soomaaliya oo Canbaareeyey Qaraxii Nairobi.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, ayaa shir jaraaid oo uu ku qabtay garoonka diyaaradaha waxa uu ku canbaareeyey qaraxii xalay ka dhacay masjidka Al-Hidaaya ee xaafadda Eastleigh ee magaalda Nairobi.
Mr. Xasan Sh. Maxamuud ayaa tacsi u diray dowladda Kenya, waxa uuna ku sababeey qaraxyada ka dhacaya dalka Kenya inay ka danbeeyaan dad ka soo horjeeda taageerada ay Kenya siinayso dowladda Soomaaliya.
Dhinaca kale waxa uu madaxweynuhu shirkiisa Jaraaid uga hadlay safarkiisii wadanka Turkiga iyo wixii uga soo qabsoomay.
Warbixinta Madaxweynaha halka hoose ka dhageyso.